မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး စရတာနဲ့ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အတူ ဆိုးမွေးအနေနဲ့ ပြည်တွင်းရောင်စုံ သောင်း ကျန်း သူတွေပါလာခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေး မရခင် တုန်း ကတော့ အတူတူ ပူတွဲပြီး တိုက်လာခ ကြသည့် သူတွေ အချင်းချင်း လွတ်လပ်ရေးကြီး လဲ ရပြီးလာရော အချင်းချင်းကို အာဏာတွေ မိန်းမောပြီး တိုက်ခို က်ကြတာ အခုထိကို မဆုံးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေလဲ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပေမယ့် ငြိမ်း ချမ်းရေး က ပြောသလောက်ကို အဆင်မပြေသေးဘူး။ တဖက်နဲ့တဖက် တိုက်နေကြ တဲ့ တိုက်ပွဲ အဲဒီတိုက် ပွဲတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေက ဘယ်က ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သုံးတာလဲဝယ်တာလဲ ?? ထုတ်လဲ ? ? ဒီနိုင်ငံက ရှိတဲ့ သယံဇာတက နေဘဲ ထုတ်ယူသုံးစွဲနေတာဘဲ မဟုတ်လား။ တဖက်နဲ့တဖက်နဲ့ မယုံကြည် မှုတွေ အမုန်းပွားမှုတွေ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး တိုးတက်မှု ဆုတ်ယုတ်ေ နရ တာပါ။ လက်န က်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အများဆုံး နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အများဆုံးနိုင်ငံရယ်လို့ ကမ္ဘာ့မှာ နံပါတ် ထိပ်ဆုံး နေရာ မှာ ချိတ်တဲ့ အနေအထားမှာရှိ ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တဖက်အဖွဲ့နဲ့ တဖက်အဖွဲ့ အမြင်မကြည်မှုတွေ အရမ်းကို များပြားနေ ကာ ငါဆိုတဲ့ အတ္တ၊ ငါမဟုတ်ဘဲ တခြားသူတစ်ဦးလုပ်ရင် မကောင်းဘူးဆို တဲ့ အပြစ်ပြောဖို့ တွေက အရမ်းကိုများပြားနေတဲ့ တို င်းပြည် ဖြစ်နေပါသည်။ နောက်တစ်ခုက သက်ဦးဆံပိုင် အာဏာရှင် စနစ်ကို မလိုချင်ဘူး ပါးစပ် က နြေေ ပာ နေသော်လည်း ပြောနေတဲ့သူ ကိုယ်တိုင် အာဏာရှင်စနစ် ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးနေ တယ်လို့ တွေ့မြင် ယူ ဆ နေရပါသည်။ တယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကူညီမှု ရိုင်းပင်းမှုမရှိဘဲ အပြစ်ပြောဖို့လောက်တာ စဉ်းစားနေ ကြ ပါသည်။ မင်းသားကြီး မလုပ်ရလျှင် ပတ်မကြီး ထိုးခွဲမယ့် ပုံစံမျိုးကို လုပ်နေကြတာပါ။
တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ကို အမြင်ကြည်ကြည်နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြမယ်။ ကူညီ ထောက် ပံ့ပေးကြမယ်ဆိုရင် အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းတွေ ပေးမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို လျှင်လျှင်မြန်မြန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာ အမှန်ဘဲဖြစ်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမုန်းတရားတွေ မယုံကြည်မှုတွေကို လျော့ ပြီး နိုင်ငံကြီးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မလုပ်ဆောင်နိုင် အာင် မယုံကြည်မှုတွေ ဖြစ်အောင်လို့ တခြားသူတွေမှ မဟုတ်ကြဘဲ…… ဟိုးရှေ့ယခင် ကတည်းက အတူ တူ တကွ နေထိုင်နေကြတဲ့ ညီအစ်ကိုအရင်း တိုင်းရင်းသားတွေပါဘဲ ပူးပေါင်းပြီး အခက်အခဲများ ကို ပေါင်း စ ပ်ဖြေရှင်း ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ခဲခက်တဲ့ အခက်အခဲတွေဘဲဖြစ်ြ ဖစ် ကျော် လွားနိုင်မှာ ပါဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပေါင်းစည်းမှုကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ထိပ်တန်း ရောက်ခဲ့တဲ့ သာဓကေ တွရှိသ လို ပေါင်းစည်းမှု စည်းလုံးမှုမရှိလို့ နိုင်ငံလဲ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲခဲ့ သာဓကတွေ လည်းရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီး ပြိုကွဲမသွားအောင် နိုင်ငံကြီး နိုင်ငံတကာ အလယ်မှာ မျက်နှပန်းလှေ အာင် တို င်းရင်းသား အားလုံးပေါင်းစည်း ညီညွှတ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကူညီ အကြံဥာဏ်ေ ပးပြီးဆောင်ရွက်လုပ် ဆော င်သွားမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီးအချိန်တိုအတွင်း တိုးတက်လာ မှာဖြစ်ပါ သည်။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မှ နိုင်ငံကို ကောင်းအောင် တိုးတက် အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ် ကျတဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ကနေ ပူး ပေါင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ထင်မြင် ယူဆလိုက်ပါသည်။ ***
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ထိခိုက်လိုခြင်းမရှိ မိမိ၏ထင်မြင် ယူဆချက်သာ ဖြစ်ပါ သည်။ အမှားများပါခဲ့ရင် ကျွန်တော်၏လေ့လာမှုအားနည်းချက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ***
at 11/26/2013 12:33:00 PM